Akụkọ - Ihe niile I kwesiri ịma maka ụgbọ ala ụlọ
Mgbe anyị kwesịrị ịzụta ụgbọ ala ala ute, olee otú ịchọta ndị kasị mma emeputa?
Nwere ike ịchọ na Google site na "ụlọ ọrụ nrụpụta ụgbọ ala", mgbe ahụ ị nwere ike ịchọta ọtụtụ weebụsaịtị, yana ịkwesịrị ikpe ikpe nke bụ ụlọ nrụpụta ụgbọ ala ị chọrọ, yana ịlele ihe eji etinye ụgbọ ala bụ ihe ịchọrọ. E nwere ụfọdụ dị iche iche ụdị ihe maka ụgbọ ala ute: kapeeti, ịkwanyere ụgbọ ala ute, akpụkpọ anụ ụgbọ ala ute, Rubber ụgbọ ala ute,PEgbọ ala TPE, PRgbọ ala TPR.
Next mkpa ka ị na-elele àgwà nke ụgbọ ala ute, ọtụtụ ụgbọ ala ute na-mere site ebu ọ bụla dị iche iche ụgbọ ala ụdị, otú i kwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ụgbọ ala ute ụdị gị mkpa na mkpa iji chọpụta ma ọ bụrụ na nke ukwu ị chọrọ bụ ọ dị mma iji mepụta, ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere nnukwu MOQ. Anyị factory nwere njikere ụgbọ ala ute maka ọtụtụ n'ime ụgbọ ala ute, Anyị MOQ bụ 5 tent ọ bụla, na anyị nwere ọtụtụ narị ụgbọ ala ute na akpati ute ebu.
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịma ma ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ike imepụta ụrọ maka gị, n'ihi na iwu gị ga-ebu ibu karịa mma ụgbọ ala TPE anyị, ị ga-enwetakwa ụfọdụ ndị ahịa mkpa iji akpụzi ha na akara ngosi na akara ngosi pụrụ iche ha, ọ ga-egosi gị ọdịiche nke ụgbọ ala na ahịa. Thekpụrụ dị mma ga-ewetara gị ezigbo ire ere ma ga-adọta ndị ahịa ọhụrụ. Ọ ga-enye aka mee ka ndị ahịa ochie gị kwụsie ike. Azụmaahịa gị ga-ebu ibu nke ukwuu na ute ụgbọ ala TPE anyị. Factorylọ ọrụ anyị nwere ike ịme usoro na njirimara na ogo arịrịọ gị, ọ ga - ahapụ gị ka ị pụọ iche n'ọtụtụ ndị na - ere ahịa.
Ihe kachasị mkpa bụ ịdị mma, nke a dị ezigbo mkpa, yana ezigbo mma, ị nwere ike ịre ndị ahịa ndị ọzọ, ndị ahịa ga-erekwa nke ọma na mma dị mma, mgbe ahụ ha ga-eme ka usoro iwu ga-abawanye n'ọdịnihu. Nke a bụkwa akụkụ dị oke mkpa. Nke a bụkwa ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ anyị. Anyị na-eji ihe kachasị mma TPE maka ihe mgbochi ụgbọ ala na akpati, ma jiri ọnụahịa dị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Anyị nwere obere uru, mana ndị ahịa niile zụtara ngwaahịa na ụlọ ọrụ anyị nwere ike ịnweta 5 kpakpando nke ọma sitere na ndị ahịa niile, Otu oge bụrụ ndị ahịa anyị, bụrụ ndị ahịa anyị ruo mgbe ebighi ebi. Anyị iru ogologo oge na-arụ ọrụ niile ahịa. Ihe kachasị mkpa na mmepụta anyị bụ iji ọnụahịa ahụ mee ka ngwongwo ahụ ka mma, anyị chọrọ ịkwalite ya nke ọma ma ka mma.
Isi okwu ikwesiri ị attentiona ntị bụ ngwugwu na mbufe. Factorylọ ọrụ mmepụta ihe dị ala ga-eji ogo dị alaIhe TPEha ga-ejikwa ngwugwu dị ala. Ọ ga-emebi ụgbọ ala, ọ dị ezigbo mkpa na ngwugwu.
Anyị nwere ike ibudata setịpụrụ atọ nke ọ bụla (ihe mgbochi ọkwọ ụgbọ ala, ihe eji eme njem, ihe ndina azụ) na otu katọn, anyị nwekwara ike ibipụta akara ngosi aha na katọn. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike izipu ozugbo na adreesị ịchọrọ ma ọ bụ zigara na nkwakọba amazon. Anyị nwekwara ike ibute pc 20 katọn ọ bụla, n'ụzọ dị otú a nwere ike ịchekwa ohere, wee chekwaa ụgwọ mbupu mmiri, ndị ahịa nwere ike iburu ya na katọn nke ha mgbe ha natara ya.